रोचक / विचित्र – Page2– Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०२, २०७६१५:२२
मानिसको दिगमाबाट कस्ता कस्ता जुक्ती निस्कँछन् ? कुनैले देश हाँकेका छन्, कुनै विश्वमा राज गरेका छन् त कसैले ठूला–ठूला अविष्कार गरेका छन् । यती मात्रै होइन् मानिसले अक्सर यस्ता जुक्ति निकाल्छन्, जुन निकै वकवास खालका
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०२, २०७६१५:१७
काठमाडौँ । टिकटक बनाउन प्रयोग गरेको बन्दुकले एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १९ वर्षिय एक युवकले आफ्नो साथीलाई देखाएर टिकटक भिडियो बनाउँदै गर्दा यस्तो घटना घटेको हो । प्रहरीको अनुसार शनिबार
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०७५१७:१६
काठमाडौँ । भारतमा निर्वाचन चलिरहेको बेला निकै भयानक घटना सार्वजनिक भएको छ । भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी लाई चुनावको समय पारेर हत्या गर्ने षड्यन्त्र बनाइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सुरक्षामा गम्भिर असर परेको भन्दै
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०७५१३:५७
काठमाडौँ । घरमा होमवर्क गर्न बत्ति नभएपछि सडकमा गएर होमवर्क गर्दै गरेको एक बालकको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । विकासको लहरले जताततै छाएको छ भन्ने अनेकौ किसिमका नारा लाउने र उत्सव मनाउने गरेको
गर्मी समय आउँदै गर्दा गर्मीबाट बच्ने यी उपाय कस्तो लाग्यो ? हेर्नुहोस् हाँसो रोक्न नसकिने तस्वीरहरु !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०७५११:२३
काठमाडौँ । दिनदिनै गर्मी बढ्दै गएको छ । मौसम पनि मानिसको आ आफ्नै रोजाइ हुन्छ । कसैलाई गर्मी समय मन पर्छ भने कसैलाई जाडो मनपर्छ । यद्यपी जसलाई जुन मौसम मन परेपनि मौसम अनुसार पाएको
तीन वर्षीया बालिकाको अजिंगर प्रेम, मुखमा औषधि लगाइदिन्छिन्, गोहीको दाँत सफा गर्छिन्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०७५०९:३५
एजेन्सी, २९ चैत । अजिंगर र गोहीले आफ्नो छेउमा पुग्ने जनावर वा मानिसलाई क्षणभरमै आफ्नो आहारा बनाउन सक्छन् । तर, इन्डोनेसियामा एक परिवार यस्तो छ, जो आफ्नो तीन वर्षीया छोरीले अजिंगर र गोहीसँग खेलेको दृश्य निर्धक्कसँग